Lọ ọrụ ozi ọma-Shenzhen SH-MBR Technology Co., Ltd.
Ngwunye Ọdụ Ahụ N'ime Ezinaụlọ
Ngwunye Ọgwụ Ahụike Ahụike
Nlekọta Ahụike Ọwa mmiri nke Obodo
Mkpochapu nke Scenic, Akụrụngwa Ọgwụ mmiri
Ngwongwo Ọdụ Ahụ Ahia
Ihe nkiri MBR
Ajụjụ & Nduzi
Ajụjụ maka Companylọ Ọrụ
Ajụjụ maka Ngwaahịa
Ntuziaka maka ịzụta ihe
Misfọdụ nghọtahie banyere MBR Usoro ⑥
Membrane Bioreactor (MBR) bụ ngwakọta nke usoro akpụkpọ ahụ dị ka microfiltration ma ọ bụ ultrafiltration na sludge arụ ọrụ, nke na-eme ka ihe ndị dị ala dị ala na mmiri mmiri na-edozi. Usoro akpụkpọ ahụ na-agbanwe nsị mmiri iji kpochapụ mmiri dị elu. Obere akara aka nke teknụzụ ọgwụgwọ na-enyere usoro ndị a aka ịbanye na okike, ọmarịcha gburugburu na ịgwọ mmiri mmiri maka iji mmiri. Mkpụrụ sludge na usoro MBR dị oke ala. Ogo nke kpochapu na MBR ka nke oma na ASP. Enwere ike iji mmiri si MBR weghachite maka ngwa ulo oru mgbe usoro RO (Reverse Osmosis) gachara. MBR nwere ike ịrụ ọrụ na MLSS dị elu (Mixed Liquor Suspended Solids) ma e jiri ya tụnyere ASP dị na mbụ (Usoro Mbupute Arụ Ọrụ).
Ego ole bụ ego nke ngwa mgbakwunye mmiri nsị?
Ego ole bụ ego nke ngwa ọgwụgwọ mmiri nsị? Ekwenyere m na ọtụtụ ndị na-azụ ahịa ga-ajụ ajụjụ a ma nwee nchegbu dị ukwuu banyere ajụjụ a. Ka anyị lee anya na ezigbo ọnọdụ! Ngwakọta ngwa ngwa mmiri nsị
Misfọdụ nghọtahie banyere MBR Usoro ⑤
Misfọdụ nghọtahie banyere MBR Usoro ④
Misfọdụ nghọtahie banyere MBR Usoro ③
Misfọdụ nghọtahie banyere MBR Usoro ②
Adreesị: inglọ nke Xinghe Nke 100 Zhongxing Rd. Shajing Bao'an Shenzhen
Ekwentị: + 86-755-23208806